Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Lambarada Rakaabka ayaa kusii kordhaya Madaarka Frankfurt
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Isu socodka dhammaan garoomada diyaaradaha ee Fraport Group ayaa si aad ah u kordhay, iyadoo tirooyinka sannadka soo socda qayb ahaan ay kor u kaceen boqollaal boqolkiiba-in kasta oo lagu saleeyay heer aad u hooseeya oo taraafikada bishii Luulyo 2020.
Isbedelka wanaagsan ee Fraport wuu socdaa.
FRA waxay soo dhoweysay 2.85 milyan oo rakaab ah bishii Luulyo ee 2021.
Marka la barbardhigo Luulyo 2020, tirooyinka rakaabka ayaa sare u kacay oo kordhay 115.8 boqolkiiba.
Wax -soo -saarka xamuulka ee Madaarka Frankfurt wuxuu arkaa koboc xoog leh oo dheeri ah, garoomada diyaaradaha ee Fraport Group sidoo kale waxay joogteeyaan isbeddel xagga sare ah
Nambarada rakaabka ee Madaarka Frankfurt (FRA) FRA ayaa soo dhoweysay 2021 milyan oo rakaab ah bishii warbixinta, taasoo ka dhigan mugga rakaabka ee ugu sarreeya bil kasta tan iyo markii uu dillaacay masiibada Covid-2.85. Marka la barbar dhigo Luulyo 19, tani waxay la mid tahay koror ah 2020 boqolkiiba. Si kastaba ha noqotee, tiradani waxay ku saleysan tahay qiime hooseeya oo la duubay bishii Luulyo 115.8, markii gaadiidku hoos u dhacay iyada oo ay sare u kacday heerka caabuqa coronavirus.
Bisha warbixinta, heerarka dhacdooyinka COVID-19 oo hooseeya iyo kororka tallaallada ayaa saamayn togan ku yeeshay baahida-gaar ahaan meelaha fasaxa dhaqameedyada. Maalmaha ugu sarreeya, tirooyinka rakaabka ee Frankfurt waxay gaareen ilaa 60 boqolkiiba heerka cudurka faafa ka hor. Maalintii ugu mashquulka badnayd bisha warbixinta ayaa ahayd 31 -kii Luulyo, markii 126,000 oo rakaab ah ay ku safreen Madaarka Frankfurt - tirada ugu badan ee rakaab ah ayaa la diiwaangeliyay hal maalin tan iyo markii uu cudurku dillaacay.
Marka la barbardhigo Luulyo 2019, taraafikada rakaabka ee FRA ayaa weli diiwaangelisay boqolkiiba 58.9 hoos u dhac bishii warbixinta. Muddadii u dhexaysay Jannaayo-Luulyo 2021, Madaarka Frankfurt wuxuu soo dhoweeyay ilaa 9.3 milyan oo rakaab ah. Marka la barbar dhigo isla muddadii toddobada bilood ahayd ee 2020 iyo 2019, tani waxay ka dhigan tahay hoos u dhac 30.8 boqolkiiba iyo 77.0 boqolkiiba siday u kala horreeyaan.
Gaadiidka xamuulka ee Frankfurt ayaa sii waday koritaankeedii, in kasta oo ay yaraatay awoodda caloosha oo ay bixiyeen diyaaradaha rakaabka. Bishii Luulyo 2021, soosaarka xamuulka ee FRA (oo ka kooban hawo-mareenka iyo farriimaha hawada) ayaa ku booday 30.0 boqolkiiba sannadkiiba illaa 196,223 metric ton. Marka la barbar dhigo bishii Luulyo 2019, xamuulka ayaa kor u kacay 9.8 boqolkiiba. Dhaqdhaqaaqyada diyaaraduhu waxay kor u kaceen boqolkiiba 79.5 sannadkiiba ilaa 27,591 duulimaadyo iyo soo degitaan. Miisaannada duullimaadka ugu badan ee la ururiyey (MTOWs) waxay sare u kaceen 68.5 boqolkiiba waxayna ka hooseeyeen 1.7 milyan oo mitir tan bishii Luulyo 2021.